Aasaaska abuuray furfurnaanta? Rabbi Michael Avraham
Aasaaska abuuray furfurnaanta?
Jawaabta > Qaybta: Falsafadda > Aasaaska abuuray furfurnaanta?
Josephon Waxaa la weydiiyay 4 sano ka hor
Asalaamu Calaykum Maran Shlita.
Ma aqaano in rabbaanku uu maqlay waxa ka dhacaya sannadihii ugu dambeeyay bulshada aan rasmiga ahayn ee Baalei Teshuvah sidaas darteed waxaan caddayn doonaa sanado badan haddii Baalei Teshuvahs intooda badani ay ka tagaan qaab nololeedka ultra-Orthodox iyo Kuwa cusub xitaa ma galaan inta badan. caqiidada dadka fudud ee u hogaansan xariiqda fudud ee halakhah iyo in ka badan oo aan la yaabanahay dhacdo sidaas oo kale ah oo ka soo horjeeda Aasaaska Aasaaska ayaa abuuray bulsho kala duwan oo furfuran, waxaan dhihi lahaa waxaa sabab u ah dabeecad la'aanta jinsiga ee xisbiga Bacath iyo Dhaawacyo soo gaaray dunida ultra-Orthodox-ka ah.Sidoo kale, qaar badan oo ka mid ah xubnaha Baadhista ee aan la kulmay waa diin-casri ah dhinac kasta.
Raabbigu ma sharxi karaa ifafaalaha?
Su'aal tags: ט
Sharaxaadaadu waa mid xiiso leh, inkasta oo aanan garanayn inta ay ka dhigan tahay (runtii ma "badi jawaabayaasha jawaabaha").
Waxaa jira laba xaqiiqo oo sharraxaysa halkan: 1. inay noqdaan kuwo casri ah. 2. inay ilaashadaan tafsiir asaasi ah oo xalaal ah iyo caqiidada.
Ma hubo dejintaada Ortodokska casriga ah waxa kale oo lala xidhiidhiyaa tafsiir halakhi ah oo dabacsan. Qeexid ahaan, waxa ay u muuqataa in ay tahay shaqo shay oo aad noloshaada ku qabsanayso, ama akhriska gabayada iyo suugaanta, ama xirfad faneed. iima cadda.
Waxaa jiri kara sababo badan oo tan: in la barto adduun kale (waxaa jira beddel kale oo iyaga ka horreeya). Ku daalay aas-aaska xad-dhaafka ah (falcelinta tallaabada waalidka oo dhinac ah, iyo ku dayashada fallaagada dhinaca kale). Dabcan waxaa jira sababo nafsi ah (traumas. kuma ay korin xidid ku salaysan dhaqanka ultra-Orthodox. Waalidiintooda sidoo kale waa nooca raadinta).
Isla markaana ma haystaan ​​qaab kale oo diineed sababtoo ah waxay aqoonsan yihiin cilmaaninimada ama ultra-Orthodoxism. Malaha taasi waa sababta fikradooda halakhah u tahay ultra-Orthodox.
Dhammaan sharaxaadahan waa suurtagal, laakiin ifafaale waxay mudan tahay baaritaan nidaamsan.
Gidcoon Waxay ku jawaabtay 4 sano ka hor
Sida caadiga ah ku celcelinta jawaabtu kuma dhacdo sababo caqli-gal ah, (haa, waxaan maqlay "professors" oo lagu qancay "qiimaha" iyo "wada hadalka") markaa isticmaalka maskaxdooda waxay keeni doontaa soo noqnoqoshada su'aasha mar kale.
mikyab Shaqaale	Waxay ku jawaabtay 4 sano ka hor
Tani waa xog guud. Ku dhawaad ​​tallaabo kasta oo qof ayaa ka kooban dhowr diyaaradood, nafsi iyo falsafad. Laakin labaduba waxay ku jiraan jawaabta iyo ka bixitaanka su'aasha labadaba.
Yahuudah h Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)